ukudla Magic imoto, okuyinto ibhizinisi zobuchwepheshe onguchwepheshe design, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa futhi yokuthengisa izimoto kwezohwebo.
Inkampani Ngokuqondene R & D kanye emisha njengoba umongo ukwenza ngcono ukukwazi ukuncintisana yayo, futhi isungule i team omuhle-R & D kanye nomklamo, ukugxila ukukhalipha, ezishintshayo, lunye, futhi intuthuko.
Silwela emisha ezimele. Le nkampani iye etholwe ezingaphezu kuka-100 kazwelonke-level ubuchwepheshe patent, ukuhlinzeka ngezifiso mobile esitolo izixazululo izidingo ikhasimende, nokusiza amakhasimende ukwakha ngefilosofi entsha ibhizinisi.
Le nkampani kuyinto nomkhiqizi professional ngezifiso ezitolo ephathekayo. Imikhiqizo ukumboza inqwaba izinhlobo ezifana amaloli ukudla okusheshayo, ezihlukahlukene ice cream ezinqoleni, izinhlobo ezahlukene baking ezinqoleni, izimoto tinhlelo tekufinyelela ebantfwini, ukuthengisa, studio izimoto, nobuhle nail izimoto.
Ibhizinisi ihlanganisa ukudla okulula, iziphuzo emgwaqweni, sombuso, izinto zikagesi, ekhaya nokunikela, ingubo umkhakha, ubuhle ukwakheka umkhakha, embonini yokwakha izindlu, ezokuvakasha kanye nezinye izimboni. Imikhiqizo yethu lithunyelwa-United States, eNingizimu Korea, i-European Union, eMpumalanga Ephakathi nakwamanye amazwe ase-Asia naseziqhingini European kanye nezifunda.